Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ilizwe | Ummandla » Layibheriya » Ubuncinci bangama-29 abantu ababhubhileyo kumthandazo wokunyathela eLiberia
Iinkcukacha malunga nale ntlekele zahlala zingumzobo. Ngokweengxelo zasekuhlaleni, lo msitho wawuyindibano yomthandazo wobuKrestu – owaziwa eLiberia “njengomnqamlezo” – owawubanjelwe kwibala lebhola ekhatywayo eNew Kru Town, ihlomela-dolophu labasebenzi kwikomkhulu ledolophu.
Amapolisa aseMonrovia athi ubuncinci abantu abangama-29 babulawa kungquzulwano kwindibano yomthandazo wamaKrestu kwikomkhulu laseLiberia ngoLwesine, kwaye kukho uloyiko lokunyuka kwamanani.
Isithethi samapolisa uMoses Carter uthe inani labantu ababhubhileyo lelomzuzwana kwaye “linokwenyuka” kuba uninzi lwabantu lukwimeko emaxongo. Wongeze ngelithi abantwana baqukwe kwabangasekhoyo.
Usekela-mphathiswa wezolwazi eLiberia wanikela inani elifanayo lokufa.
“Ogqirha bathi abantu abangama-29 babhubhile kwaye abanye bakuluhlu olubalulekileyo,” utshilo uJalawah Tonpo, efowunela unomathotholo welizwe kwisibhedlele esikufutshane.
“Olu lusuku olulusizi kweli lizwe,” wongeze watsho uTonpo.
Amajelo eendaba asekuhlaleni axele ngoLwesine ukuba le ntlekele yasebusuku yenzeka kwindibano ebibanjelwe kwibala lebhola ekhatywayo eNew Kru, emantla eMonrovia. Akukacaci ukuba yintoni le ibangele olu qhushululu.
Oku ngakumbi: Layibheriya
Uhlaselo olubulalayo lwemoto eBelgium Carnival
Uphuhliso loKhenketho oluZinzileyo kunye neziQinisekiso zi...
Isiphithiphithi sesikhululo seenqwelomoya saseDuesseldorf sisiqalo nje: Uncedo...
I-IMEX Frankfurt: Wonke umntu umenyiwe ukuba enze oku...